Porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအပေါ် ဦး နှောက်လေ့လာမှု - သင်၏ Brain On Porn
ဤစာမျက်နှာကို (နှစ်ခုစာရင်းကိုပါရှိသည်1) အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များနှင့်စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် (2အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအကဲဖြတ်) အာရုံကြောလေ့လာမှုများ (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder).
ယနေ့အထိထုတ်ဝေသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၅၅ ခု မှလွဲ၍ အားလုံးသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများ porn စွဲမော်ဒယ်တွင်မှအမှား) ။ ဤအမှု၏ရလာဒ်များ 57 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ (နှင့် လာမည့်လေ့လာမှုများ) နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည် ရာနှင့်ချီသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု “ ဦး နှောက် လေ့လာမှုများ”, အရာအချို့လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ အားလုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု do အဖြစ်စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောရဝုဏ်ကိုထောကျပံ့ လေ့လာမှု ၄၅ ခုကျော်သည်ပြင်းထန်မှု / သည်းခံမှု (လေ့ကျင့်မှု) နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်.
ဤစာမျက်နှာသည်အောက်ပါ 34 ဖြင့်စတင်သည် အာရုံကြောသိပ္ပံ -based ဝေဖန်ချက်များနှင့်စာပေ၏သုံးသပ်ချက်များ (ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်ဖော်ပြထားသည်):
အဆိုပါစာပေ & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏သုံးသပ်ချက်များ:
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (et al Love ။, 2015). အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းခွဲအမျိုးအစားများ, နှင့် ပတ်သက်. neuroscience စာပေ၏တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်နှစ်ခု critiques ဆိုးသွမ်း EEG လေ့လာမှုများ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့များအားဖြင့် နီကိုးလ် Prause (သူမြား မဟုတ်မမှန်တောင်းဆိုမှုများ တွေ့ရှိချက်) porn စွဲအပေါ်သံသယကိုသွန်းလေ၏။ ကောက်နှုတ်ချက်:
compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနပြုချက်အရစွဲလမ်းမှုနှင့်သိသိသာသာတူညီမှုကိုအကြံပြုသည့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၊ compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ ICD-11 ရှိတွန်းအား - ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုထားသည်, စွဲ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုယ်စားပြုအဆိုပြုထားအမြင်နှင့်ကိုက်ညီလျက်ရှိသည်။
ဤအမြင်သည်အထူးသဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအချို့ DSM-IV ချင်သောဒေါသစိတ်နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်မမှန်မှုများအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော်ဤဒြပ်စင်များကိုကြာရှည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကအချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး DSM-IV မှ DSM-5 သို့ပြောင်းလဲခြင်းတွင် Impulsse Control Disorders ၏အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသောရောဂါလောင်းကစားခြင်းအားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ICD-11 beta မူကြမ်း site သည်လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြdisနာများကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ၊ pyromania, kleptomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲစေသောရောဂါများပါ ၀ င်သည်။
CSB နှင့်စွဲလမ်းမမှန်အကြားတူညီအကြံပြုစေခြင်းငှါ၎င်း domains များအကြားဝေါ်လ်တန် et al အားဖြင့်ချန်လှပ်အများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, neuroimaging နေကြသည်။ (2017) ။ ကန ဦး လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ CSB ကိုမကြာခဏဆန်းစစ်လေ့ရှိသည် (Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်) 2016b; Kraus, Voon & Potenza, 2016b) ။ ထင်ရှားသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည့်မက်လုံးပေးလွန်းခြင်းသီအိုရီ (Robinson & Berridge, 1993) - စွဲလမ်းမှုရှိသူများအနေဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများသည်ပြင်းထန်သောမက်လုံးများတန်ဖိုးများကိုရရှိပြီးတပ်မက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှု ventral striatum အပါအဝင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ ဦး နှောက်ဒေသများ၏ activation ဆက်စပ်လိမ့်မည်။ cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းများသည်သီးခြားအုပ်စုများ (Sescousse, Barbalat, Domenech, & Dreher) ကိုအထူးဂရုပြုမှု (ဥပမာ - ငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ခေါ်ယူခြင်း) ကိုစုံစမ်းရန်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ 2013), နှင့်ကျွန်တော်မကြာသေးမီကလက်တွေ့နမူနာ (Gola et al လေ့လာရန်ဤတာဝန်လျှောက်ထားခဲ့ကြ။ , 2017).
ပြfoundနာများရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကုသရန်ကြိုးစားသူများသည်အသက်အရွယ်၊ ကျား၊ မ၊ ၀ င်ငွေ၊ ဘာသာတရား၊ မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပမာဏ၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၊ ဆုများ, ဒါပေမယ့်မဆက်စပ်ဆုလာဘ်များအတွက်မဟုတ်, ငွေကြေးဆိုင်ရာများနှင့်ဆုလာဘ်များအတွက်။ ဤ ဦး နှောက်ဓာတ်ပြုမှုပုံစံသည်မက်လုံးပေးလွန်းခြင်းသီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်ပြီး CSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောကန ဦး ကြားနေလေသံများမှသွေးဆောင်ခြင်း၊
အပိုဆောင်းအချက်အလက်များအရ CSB တွင်အခြား ဦး နှောက်ဆားကစ်နှင့်ယန္တရားများပါ ၀ င်နိုင်ပြီး၎င်းတွင် anterior cingulate, hippocampus နှင့် amygdala (Banca et al ။ , 2016; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014) ။ ဤရွေ့ကားများထဲတွင်ကျနော်တို့ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်မြင့်မားသောဓာတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးချဲ့ amygdala ဆားကစ်အထူးသဖြင့်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည် (Gola, Miyakoshi & Sescousse, 2015; Gola & Potenza, 2016) ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်မားနှင့်အတူ ရှိနေ. အချို့ CSB တစ်ဦးချင်းစီ (Gola et al လေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ , 2017) နှင့် CSB ရောဂါလက္ခဏာများကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ pharmacological လျှော့ချရေးနှင့်အတူလျှော့ချနိုင်ပါသည် (Gola & Potenza, 2016) ...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုအမြဲတစေအခက်တွေ့နေသောအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသူများစွာအတွက်၊ သူတို့ရဲ့ပြproblemနာကိုအမည်နှင့်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီအကူအညီတောင်းခံနိုင်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ (ဆိုလိုသည်မှာဆရာ ၀ န်များနှင့်တိုင်ပင်သူများ) သည် CSB များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ CSB အတွက်ကုသမှုခံယူရန်ဘာသာရပ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများအရ CSB ခံစားနေရသောသူများသည်အကူအညီတောင်းရန်သို့မဟုတ်ဆရာ ၀ န်များနှင့်ဆက်သွယ်စဉ်အတားအဆီးများစွာကြုံတွေ့ရကြောင်းမကြာခဏကြားသိခဲ့ရသည် (Dhuffar & Griffiths, 2016).
လူနာများအနေဖြင့်ဆရာ ၀ န်များကခေါင်းစဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်၊ ဤသို့သောပြproblemsနာများမရှိဟုဖော်ပြကြသည်၊ သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မြင့်မားသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းအကြံပြုသည်။ ကုသမှုခံယူမည့်အစားလက်ခံသင့်သည် (ထိုသူများအတွက် CSBs က ego-dystonic နှင့် lead ဟုခံစားရနိုင်သည်။ မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရန်) ။ CSB ရောဂါအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်အရလူတစ် ဦး ချင်းစီအား CSB ရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သို့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အစီအစဉ်များကိုဖွင့်ခြင်းအပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုများကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များသည်စိတ်ပညာရှင်၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအပြင်အထွေထွေသမားတော်များကဲ့သို့သောမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအပါအဝင်အခြားစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
CSB ရောဂါ conceptualize နှင့်ထိရောက်သောကုသမှုပေးဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအပေါ်အခြေခံမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရပါမည်။ အခြားမော်ဒယ်များအဆိုပြုထားပြီအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြားလက်ရှိအဆိုပြုလွှာ (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာ (ရှိပါတယ်Kraus et al ။ , 2016), ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတိုးမြှင့် reactivity ကိုညွှန်ပြမကြာသေးမီဒေတာအပါအဝင် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014).
ထို့အပြင်ကန ဦး အချက်အလက်များအရ naltrexone သည်အရက်နှင့် opioid သုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်လက္ခဏာများပါသောဆေးတစ်ခုသည် CSBs ကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် (Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Raymond, Grant, & Coleman, 2010) ။ တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါရဲ့အဆိုပြုခွဲခြားရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ CSB ရောဂါများထဲမှပုံစံပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံသည်ဟုအကြံပြုဒေတာရှိပါတယ်, အထွေထွေလူဦးရေထဲကနေ Impulse ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားကြပါဘူး။ သူတို့ကအစားတိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန် (နဲ့အတူတင်ဆက်ထားပါသည်Gola, Miyakoshi, & Sescousse, 2015; Gola et al ။ , 2017), နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာများကိုပစ်မှတ်ထား pharmacological ကုသမှု (အချို့ CSB လက္ခဏာတွေလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်Gola & Potenza, 2016) ။ ကသေးခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. ပြတ်သားကောက်ချက်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါနေစဉ်, ပိုပြီးဒေတာတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ (နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားထောကျပံ့ပေးဟန်Kraus et al ။ , 2016), နှင့်ပိုပြီးသုတေသနကအခြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ် (Potenza et al ။ , 2017).
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆောင်းပါးများစွာလှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုအာရုံစိုက်ကြတယ်။ သို့သော်အားထုတ်မှုအားလုံးရှိသော်လည်းဤအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ရောဂါဖြစ်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အဖြစ်များသည့်ပြproblemsနာများတွင်နမူနာဘက်လိုက်မှု၊ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးရေးကိရိယာများရှာဖွေခြင်း၊ ကိစ္စနှင့်အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ဤလက္ခဏာသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြနိုင်သည့်ပိုမိုကြီးမားသောရောဂါဗေဒ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်စွဲလမ်းမှု) အတွင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်အဓိကအားဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမရှိသောလေ့လာမှုနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ပြcontrolနာရှိသောစားသုံးမှုပုံစံ - ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊
Hypersexual Disorder သည်ဤပုံစံနှင့်ကိုက်ညီပြီးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ (POPU) ကိုပြuseနာကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်“ သုံးဆ A” သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (သုံးစွဲနိုင်မှု၊ တတ်နိုင်မှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်း) ကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သောအလားအလာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များအကြားဤပြproblemနာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
cybersex စွဲ၏စတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဂန္ထဝင်အေးစက်နှင့် operant အေးစက်နှင့်အတူအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်သိချင်စိတ်ကြောင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုရံဖန်ရံခါအသုံးပြုကြသည်။ ဤအဆင့်တွင်၊ အင်တာနက်ကိရိယာများကိုလိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်တွဲဖက်ပြီးဂန္ထဝင်အေးစက်စေသောရလဒ်များကပြင်းထန်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသော cybersex-related အချက်များပိုမိုသိရှိလာစေသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အားနည်းချက်များသည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင်တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒများကိုကျေနပ်စေရန် cybersex ကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်မျှော်လင့်ခြင်းစသည်တို့နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနိုင်သည့်ယန္တရားများသည်အပြုသဘောအားဖြည့်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော narcissism, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာကြံ, လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, လိင်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုအသုံးပြုမှုအဖြစ် cybersex စွဲနှင့်အတူအပြုသဘောအားဖြည့်နေကြသည်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, စိတ်နိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သောဘုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆိုးအားဖြည့်နေကြသည်။
အလုပ်အမှုဆောင်လိုအပ်ချက်လိုငွေပြမှုရေရှည်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသုံးပြုမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလိုငွေပြမှုနှင့်ပြင်းထန်သောတပ်မက်၏အပြန်အလှန် cybersex စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ အဓိကအားဖြင့် cybersex စွဲစွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာရန် electrophysiological နှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သုတေသနပြုချက်များအရ cybersex စွဲသူများသည် cybersex နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ cybersex ကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြင်းထန်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုအတွက်လေ့လာမှုများကလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုအားနည်းသောသူများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်နှင့်အားနည်းသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပိုမိုပြင်းထန်သောတွန်းအားပေးမှုဖြင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသောအခါစိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းပြီးမူရင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်း အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအွန်လိုင်း။ ဆိုက်ဘာဆက်သုံးစွဲခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိုက်ထူခြင်း၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုမရှိခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများစွာခံစားရလိမ့်မည်။
24) သီအိုရီ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2019) ၏ကုသမှု- ကောက်နှုတ်ချက်:
30) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမမှန်မကန်ပြုခြင်းအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တွင်မည်သည်များပါဝင်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀) - မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအရေးကြီးသောစာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုတေသနအဆိုပြုချက်အချို့ကိုညင်သာစွာပြင်ဆင်သည်။ ပေါ်လွင်ချက်များအနက်စာရေးဆရာများသည်ညစ်ညမ်းသော“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီခြင်း” အယူအဆကိုညစ်ညမ်းလိုလားသူသုတေသီများနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့အပြင်နှိုင်းယှဉ်အထောက်အကူပြုဇယားကြည့်ပါ compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ နှင့်မကျန်းမမာ DSM-5 Hypersexual Disorder အဆိုပြုချက်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများမှရရှိသောအပျော်အပါးသည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်သည်းခံမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။Kraus, Voon, & Potenza, 2016) နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံ (Gola & Draps, 2018) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သည်းခံနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္communityကိုရပ်ရွာနှင့်ဆေးခန်းဆိုင်ရာနမူနာများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ချန် et al ။ , 2021) ။ …
CSBD ကိုတွန်းအားပေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ …နောက်ထပ်သုတေသနသည် DSM-5 နှင့် ICD-11 ရှိအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအထိလောင်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ အချို့သောသူများအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်း ... စိတ်မရှည်သောအရာသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။နှစ်ဦးစလုံး et al ။ , 2019).
... ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီဟုခံစားရခြင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အား CSBD ၏ရောဂါလက္ခဏာကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသင့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအကြောင်းအရာကိုလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသည် (ဥပမာ - အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းများပါ ၀ င်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ)တံတားများ et al ။ , 2010) လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုFritz, Malic, ပေါလု, & Zhou, 2020), အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်သွေးထွက်သံယို၏ themes များ (Bőthe et al, 2021 ။ Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, & Baughman, 2015) ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဟုအစီရင်ခံခံရနိုင်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျအလွန်အကျွံကြည့်ရှုခြင်းသည်ဒိုမိန်းမျိုးစုံ (ဥပမာ - တရားဝင်၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်မိသားစု) တွင်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူတစ် ဦး သည်အခြားအပြုအမူများ (ဥပမာ - လောင်းကစားခြင်းတွင်လောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း) နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုခံစားရနိုင်သည်။ သို့သော်ကုသမှုကာလအတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ (Lewczuk, Nowakowska, Lewandowska, Potenza, & Gola, 2020) ။ …
31) လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ၊ ပြသနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါတို့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - တူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ (၂၀၂၁) - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ (GD)၊ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း (PPU) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (BED) ၏အာရုံကြောသိမြင်မှုယန္တရားများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (prefrontal cortex) အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (အရက်၊ ကိုကင်းနှင့် opioids ကဲ့သို့သော SUDs) နှင့်စွဲလမ်းစေသည့်သို့မဟုတ် Maladaptative ရောဂါများ (GD နှင့် PPU ကဲ့သို့သောအပြုအမူများ) ကိုအခြေခံသည်။5,6,7,8, 9••] ။ စွဲလမ်းမှုနှင့် ED များအကြားမျှဝေမှုများကိုအဓိကအားဖြင့်အပေါ်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းအပါအဝင်ဖော်ပြထားသည်။10,11,12] နှင့်အောက်ခြေမှအောက်အကျိုးရလဒ် -13, 14ပြင်ဆင်ရန်] ပြောင်းလဲခြင်း။ ဤရောဂါများရှိသူများသည်မကြာခဏညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အားနည်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကိုပြသကြသည်။12, 15,16,17] ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်သင်ယူမှုတွင်လိုအပ်ချက်များကိုမသန်စွမ်းမှုအမျိုးမျိုးတွင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ transdiagnostic features တွေထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်18,19,20] ။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်ထိုဖြစ်စဉ်များကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုရှိသူများ (ဥပမာ - dual-process နှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုပုံစံများ) တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။21,22,23,24].
CSBD နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်တိုင်အောင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆက်လက်သုံးစွဲမှုအားနည်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်လိုသောဆန္ဒများကိုမျှဝေခြင်းများဖြစ်နိုင်သည် (37••, 40).
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုနားလည်ခြင်းသည် GD, PPU နှင့် BED တို့နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့အတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ GD, BED နှင့် PPU တို့တွင်အန္တရာယ်နှင့်မရေရာမှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်အလားတူပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ခြင်းလျှော့ချခြင်းများရှိခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကရောဂါများအတွက်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသော transdiagnostic အင်္ဂါရပ်ကိုထောက်ခံသည်။
32) မည်သည့်အခြေအနေများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) တွင်“ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ” ဟုသတ်မှတ်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀) - စွဲစွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူများ၏သုံးသပ်ချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းရောဂါသည် ICD-11 အမျိုးအစား "စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ" ကိုရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်သည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများပါ ၀ င်သည့်အခြားအသိအမှတ်ပြုထားသည့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်တူသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ -
ကျနော်တို့ ICD-11 တွင်အသစ်သောရောဂါများပါဝင်အကြံပြုမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ICD-11 တွင်တိကျသောရောဂါများအဖြစ်မပါ ၀ င်သော်လည်း၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများအမျိုးအစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်သည့်အချို့သောအလားအလာရှိသောစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုစာပေတွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုအလေးပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက် 6C5Y အဖြစ် coded နိုင်ပါသည်။ (အလေးပေးဖော်ပြထားသည်) …
အဆိုပြုထားသည့် meta-level စံသတ်မှတ်ချက်သုံးခုနှင့်အညီပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောသက်သေအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းရောဂါသည် ICD-11 အမျိုးအစား“ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောမမှန်မှုများ” ကိုအဓိကသုံးမျိုးပေါ် အခြေခံ၍ ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြင်ဆင်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်, Blycker, et al ။ , 2019) ... ။
စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုရောဂါလက္ခဏာကိုအခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်ညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှခံစားနေရသူများအတွက် (လုံလောက်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်း) အတွက် ပို၍ လုံလောက်နိုင်သည်။
33) ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၁) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်စွဲမြဲ။ အလွန်အကျွံနှင့်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလက္ခဏာများနှင့်ဆိုးကျိုးများခံစားရသည်။ PPU ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုရှင်းပြရန်အတွက်လတ်တလောသီအိုရီပုံစံများသည်ကွဲပြားသောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ (ဥပမာ - တားစီးထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုစသည်တို့) သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
လက်ရှိစာတမ်းတွင် PPU ၏အခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂၁ ခုမှရရှိသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်။ ပြုစုသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် PPU သည် (က) လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဂရုပြုခြင်း၊ (ခ) ချို့တဲ့သောတားဆီးထိန်းချုပ်မှု (အထူးသဖြင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများနှင့်ဆီလျှော်မှုမှလှုံ့ဆော်မှုများမှအာရုံစိုက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်)၊ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်အားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ()) ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းချို့ယွင်းခြင်း (အထူးသဖြင့်ရေတိုအကျိုးအမြတ်အတွက်ကာလတိုအကျိုးအမြတ်အတွက် ဦး စားပေးမှုများ၊ erototica အသုံးပြုသူများထက် ပိုမို၍ ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုပုံစံများ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုချဉ်းကပ်ခြင်း၊ မရေရာဒွိဟအောက်မှာအလားအလာရလဒ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပမာဏကိုစစ်ကြောစီရင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်အချို့သည် PPU နှင့်အတူလူနာများ၏လက်တွေ့နမူနာများတွင်လေ့လာမှုမှလည်းကောင်း၊ SA / HD / CSBD နှင့် PPU ကိုသူတို့၏အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းမှရရှိသည်။ Mulhauser et al ။ , 2014, Sklenarik et al ။ , 2019ဤသည်ပုံပျက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ PPU '' အထိခိုက်မခံ '' ညွှန်းကိန်းဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
သီအိုရီအဆင့်အရဤပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်သည် I-PACE မော်ဒယ်၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ (ဆက်စပ်မှု) ကိုထောက်ခံသည်။ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016, Sklenarik et al ။ , 2019).
၃၄) သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ PDF ဖိုင် Compulsive Sexual Behaviour Disorder - ICD-11 နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောရောဂါအသစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်လက်ရှိသုတေသနစိန်ခေါ်မှုများ (၂၀၂၁) - Abstract:
2019 ခုနှစ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြulsနာ (CSBD) သည်လာမည့် ၁၁ တွင်တရားဝင်ပါဝင်သည်th ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှထုတ်ဝေသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း CSBD ကိုရောဂါအသစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ဤအပြုအမူများ၏အတွေးအမြင်ကိုဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ရှေ့ပြေးခဲ့သည်။ WHO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်သော်လည်းဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အငြင်းပွားမှုများမှာမရပ်တန့်သေးပါ။ Clinician နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များနှစ် ဦး စလုံးသည် CSBD ရှိလူများ၏လက်တွေ့မြင်ကွင်းနှင့်ဤပြproblemနာ၏အခြေခံအာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိဗဟုသုတတွင်ကွာဟချက်များကိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ (DSM နှင့် ICD ကဲ့သို့) အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းအတွက် CSBD ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးအပါဆုံးပြissuesနာများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ CSBD ။
မြင် မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ (be ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများများအတွက်ဒီရက်စွဲပါစက္ကူ - Ley et al ။, 2014 - စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ နှင့်) ကကိုးကားခဲ့စာတမ်းများအရှိဆုံးအတု။ မြင် ဒီစာမျက်နှာ လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းသွားစေသည့်လေ့လာမှုများစွာအတွက်ဖြစ်သည်။
porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်အာရုံကြောလေ့လာမှုများ (fMRI, MRI, EEG, Neuro-endocrine, Neuro-pyschological):
အောက်ဖော်ပြပါအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုနည်းနှစ်နည်းဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ (1) အဆိုပါစွဲ -related ဦး နှောက်အားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအစီရင်ခံ, ပြောင်းလဲစေနှင့် (2) ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်။
1) စွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်စာရင်းပြုခဲ့သည်: စွဲအားဖြင့်သွေးဆောင်လေးကိုအဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြသည် ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob နှင့် Nora ဃ Volkow သူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ Koob အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် (NIAAA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီး, Volkow မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ရဲ့ခဲ့သည်: စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ လိင်စွဲရှိကွောငျးက၎င်း၏အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာဖော်ပြနေချိန်တွင်အဆိုပါစက္ကူ, မူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားတယ်:
သတင်းပို့လေ့လာရေး ာင်း porn အသုံးပြုသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက် (cue-reactivity & cravings) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
သတင်းပို့လေ့လာရေး desensitization porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲဒါမှမဟုတ်လေ့ (သည်းခံစိတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
functioning ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်သတင်းပို့လေ့လာရေး (hypofrontalityporn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်) သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှု: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
2) ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်စာရင်းပြုစုထားသည်: အောက်ပါစာရင်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်ထုတ်ဝေရှိသမျှကိုအာရုံကြောလေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ကောက်နုတ်ချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားနှင့်ပဲသူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ထောက်ခံဆွေးနွေး4စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ (များ) ၏အရာညွှန်ပြနေသည်:
1) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Impulse ပြီးတော့ Neuroanatomical လက်ခဏာ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (မိုင်းလုပ်သား et al ။, 2009) - [အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ် / ဆင်းရဲသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ] - လိင်စွဲလမ်းသူများ (မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) နှင့်ပတ်သက်သည့် fMRI လေ့လာမှုငယ်တစ်ခု။ လေ့လာမှုတွင် CSB ဘာသာရပ်များရှိ Go-NoGo လုပ်ငန်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများအရလိင်စွဲသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် prefrontal cortex အဖြူရောင်များကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည် CSB သည် kleptomania, compulsive လောင်းingနှင့်အစာစားခြင်းရောဂါများနှင့်အတူတူညီသောအချက်များနှင့်တူညီသည်။ အထူးသဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် impulsivity ၏တိုင်းတာမှုများနှင့်ကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအချက်များ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ၊ အကန့်အသတ်များ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CSB လူနာများ Go-No Go လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ် မူတည်၍ သိသာထင်ရှားသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဤပဏာမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအလားအလာများမှာနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ် neuroanatomical နှင့် / သို့မဟုတ် neurophysiological အချက်များဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်အရိပ်အယောင်ပေး။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုလည်း CSB ဖွယ်ရှိ Impulse ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းညွှန်ပြပေမယ့်လည်း OCD ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအရာသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
2) ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနှင့်ရပ်ရွာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် self-အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှု (ရိဒ် et al။ , 2010) - [ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
3) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။, 2011) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
4) အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al ။, 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
5) ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al။ , 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
6) ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါ (ထိုကွာခြားချက်စေသည်Laier et al။ , 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
7) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, (လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိ et al ။, 2013) - [လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်း သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကို: ထိခိုက်စေလေ့] - ဒီ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှု လည်း အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် - porn ပိုမိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။
အတူတူဒီနှစ်ခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ ဒါကစွဲလမ်းမှု၏အမာခံများဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှစ်အမှန်တရားရှင်းပြ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
8) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (ကူနှင့်ဂယ်လိုင်းနတ်၊ 2014) - [desensitization, လေ့နှင့်အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ်] ။ ဤသည်မက်စ် Planck အင်စတီကျု fMRI လေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ correlating3အာရုံကြောတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံ: (1) လျော့နည်းဆုလာဘ်စနစ်ကမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (dorsal striatum), (2) လျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကို activation ခေတ္တလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း, (3) ဆင်းရဲတဲ့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု အဆိုပါ dorsal striatum နှင့် dorsolateral prefrontal cortex အကြား။ အဆိုပါသုတေသီများရေရှည်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်အဖြစ်3တွေ့ရှိချက်ဘတ်ပါ၏။ လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်,
9) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် (Voon et al ။, 2014) - မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အရက်သမားတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် [ာင်း / cue-reactivity ကိုနှင့် desensitization] ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းစွဲ (CSB ဘာသာရပ်များ) တွင်အတူတူပင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့ - သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုထိခိုက်မခံတဲ့။ ခဲသုတေသီ Valerie Voon said:
10) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု (Mechelmans et al ။, 2014) - [ာင်း / cue-reactivity ကို] - ဒုတိယကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
11) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲ (ဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်Laier et al။ , 2014) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့သည် IPU အမျိုးသမီး ၅၁ ဦး နှင့်အင်တာနက်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူ ၅၁ ဦး ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ မေးခွန်းပုံစံများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့် cybersex စွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အထွေထွေပြproblemနာဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုတို့ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ ၁၀၀ ပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တပ်မက်မှုညွှန်းကိန်းများအပါအ ၀ င်စမ်းသပ်မှုပုံစံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအနေဖြင့် IPU သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုနှိုးဆွသောအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ NIPU နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတင်ဆက်မှုကြောင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြproblemနာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုသည် IPU တွင်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုကို ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း၊ လိင်အဆက်အသွယ်များစွာ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်စွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဤရလဒ်သည်ယခင်လေ့လာမှုများမှလိင်ကွဲယောက်ျားများအတွက်အစီရင်ခံထားသူများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အားဖြည့်ပေးမှုသဘောသဘာဝ၊ သင်ကြားမှုယန္တရားများနှင့် IPU တွင်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue ဓာတ်ပြုမှုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ regarding နှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။
12) တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (Laier et al ။, 2014) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
13) အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှ (BANCA et al။ , 2015) - [မတရားသော / ထိခိုက်စေလေ့ / desensitization သာ. ကြီးမြတ်] - နောက်ထပ်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က fMRI လေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှု porn စွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဆက်စပ်တွေကိုအေးစက်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲများ၏ဦးနှောက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ habituated ။ အသစ်အဆန်း preference ကို-တည်ဆဲကြိုတင်မခံခဲ့ရကတည်းကက porn စွဲလေ့နှင့် desensitization ကျော်လွှားဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံမောင်းယုံကြည်ကြသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံရိပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့တိုးမြှင်အသစ်အဆန်း preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ကြားနေရလဒ်များသာရှိပြီးပြည်ပမှငွေကြေးမှအေးစက်တွေကိုတစ် generalized preference ကိုခံခဲ့ရသည်။ CSB တစ်ဦးချင်းစီမှာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းများအတွက်ပိုကောင်း preference ကိုအတူ correlating လေ့၏ဒီဂရီနှင့်အတူငွေကြေးဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲပိုမို dorsal cingulate လေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသစ်အဆန်း preference ကိုထံမှ dissociable လိင်အေးစက်တွေကိုမှချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတစ်ခုအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုက CSB တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်နိုင်သည်ဆုလာဘ်မှအေးစက်တစ် generalized တိုးမြှင့်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် cingulate လေ့ကကမကထပြုခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်တိုးမြှင် preference ကိုရှိသည်ပြသထားတယ်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
14) ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (Seok & Sohn, 2015) - [cue reactivity ကို / အာရုံခံစားမှုနှင့်အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် သာ. ကြီးမြတ်] - ဒီကိုရီးယား fMRI လေ့လာမှု porn အသုံးပြုသူများသည်အခြားဦးနှောက်လေ့လာမှုများ replicates ။ အဆိုပါကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလိုပဲကမူးယစ်ဆေးစွဲများ၏ပုံစံများထင်ဟပ်သောလိင်စွဲအတွက် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများကိုတွေ့ရှိခဲ့လေ့လာတယျ။ အတော်ကြာဂျာမန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာပြောင်းလဲမှုများကိုက်ညီသော prefrontal cortex မြားတှငျပွောငျးလဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သည်အခြားသာမန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုသေးဘယျလိုမှတုံ့ပြန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့ သာ. ကွီးမွတျ cue-reactivity ကို: အဘယ်အရာကိုသစ်ကိုဖွင့်တွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာသည့် prefrontal cortex activation ပုံစံများလိုက်ဖက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
15) "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015) - [လေ့] - တစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှုကနေ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၁၀ ခုကဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု) တွင်အရှိန်လျော့လျော့ခြင်း / လေ့ကျင့်မှုကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူသည် ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
Prause (သူမ၏ EEG ဖတ် "cue-reactivity ကို" အကဲဖြတ်ကြောင်းတရားကိုဟောပြောာင်း), အစားလေ့ထက်။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 24 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24။ သိပ္ပံနှင့်အတူမလိုက်ပါဘူး တည်းသော Anomalous လေ့လာမှု အလေးအနက်ထားနည်းစနစ်အားနည်းချက်များကိုအားဖြင့်အတားအဆီး; သိပ္ပံပညာသည်သက်သေအထောက်အထား၏သာလွန်ကောင်းမွန်မှုနှင့်အတူသွားသည် (သင်မဟုတ်လျှင်) အစီအစဉ်-မောင်းနှင်နေကြသည်).
16) Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Dysregulation (Chatzittofis, 2015) - [အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု] - 67 အထီးလိင်စွဲနှင့် 39 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု။ အဆိုပါ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဗဟိုကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထံမှကောက်နှုတ်ချက်:
17) Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2015) - [အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် / ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအရေးကြီးတဲ့] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
18) ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter (Snagkowski et al။ , 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
19) ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာကနေရလဒ်တွေကို (ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်et al Snagkowski ။, 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
20) ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (Schiebener et al ။, 2015) - [မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု သာ. ကြီးမြတ်] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
21) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးဝ (လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်Negash et al ။, 2015) - [ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု: causation စမ်းသပ်မှု] - ကောက်နှုတ်ချက်:
22) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (ဆုံးဖြတ်ပါLaier et al ။, 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
23) Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (Jokinen et al။ , 2016) - [စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် neuro-ရောင်ရမ်းအလုပ်မဖြစ်] - ဒီလေ့လာမှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလိင်စွဲထဲမှာကင်ဆာ Necrosis Factor (TNF) ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏အဆင့်မြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ TNF (ရောင်ရမ်းတဲ့အမှတ်အသား) ၏ elevated အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းဥစ္စာချိုးဖောက်မှုများနှင့်မူးယစ်စွဲတိရိစ္ဆာန်များ (အရက်, ဘိန်းဖြူ, meth) တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ hypersexuality တိုင်းတာခြင်း TNF အဆင့်ဆင့်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
24) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal ပြီးတော့ Limbic Volume ကိုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည် (Schmidt က et al ။, 2016) - [အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal circuit များနှင့် sensitization] - ဤသည် fMRI လေ့လာမှုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB ဘာသာရပ်များ (ညစ်ညမ်းစွဲသူများ) သည်ဘယ်ဘက် amygdala ပမာဏတိုးပွားလာခြင်းနှင့် amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် aligns ။ ပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတွင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် prefrontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုယူဆရသည် ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးအဆိပ်သင့်မှုဟာမီးခိုးရောင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက် amygdala ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမိဂဒလသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကန ဦး ထိတွေ့မှုတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ အမြဲတမ်းလိင်မှုကိစ္စအသစ်အဆန်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအတွက်မဂဒလာအပေါ်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည် - chronic လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာ amygdala အသံအတိုးအကျယ်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာမှု #16 အထက် "လိင်စွဲ" တစ်ခု overactive စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ်ရှိသည်ကိုတွေ့။ porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ထူးခြားသောစေအချက်များနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလား? တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အထက်မှအောက်သို့တစ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ်ပတ်သက်နေဒေသနှင့် prefrontal ၏အောက်ပိုင်းကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုခြီးမွှောကျ volumes ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်ပြတ်တောက်မက်လုံးပေးတွေကိုအဓိကရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဓိကဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင် reactivity ကိုမျက်နှာထစ်အငေါ့အမူအကျင့်ပုံစံများကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုထည်ကြီးမားသောတွေ့ရှိချက် Sud အတွက်သူတို့နှင့်အတူနှိုငျးယှဉျပေမယ့်အဲဒီတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားအထူးသဖြင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီထောက်ပံ့ထားတဲ့စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအလားအလာထပ်အကြံပြုထားသည်။ ငါတို့သည်ဤ salience ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုထို့နောက်အလွန်အမင်းအဓိကသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို [အမှတ်တံဆိပ် et al ပိုမိုနှစ်သက်ထိတွေ့အောက်ပါတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြသကြ။ , 2016; seok နှင့် Sohn, 2015; Voon et al ။ , 2014] တိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [Mechelmans et al နှင့်အတူ။ , 2014] နှင့်အထွေထွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ [အမှတ်တံဆိပ် et al လိင် cue မှတိကျတဲ့သော်လည်းမအလိုရှိကြသည်။ , 2016; Voon et al ။ , 2014].
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဂရုပြုမှုများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုပေးသောလိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်အထူး ဦး စားပေးမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ [Banca et al ။ , 2016] ။ သည်းခံစိတ်၏အယူအဆနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်တသမတ်တည်းလေ့တိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်လိင်အေးစက်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုဤတွေ့ရှိချက်ရလဒ် (သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွ) ၏ကှာခွား, ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု [BANCA et al များအတွက် preference ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ , 2016] ။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သောကုထုံးအမှတ်အသားများ၏ရောဂါနှင့်မှတ်ပုံတင်တစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်နားလည်မှုဆီသို့ဦးဆောင် CSB ၏အခြေခံ neurobiology elucidate ကိုကူညီပေးပါတယ်။
25) Ventral Striatum Activity ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2016) - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / ာင်း] - တစ်ဦးကဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု။ #1 ရှာဖွေခြင်း: ဆုကြေးစင်တာလှုပ်ရှားမှု (ventral striatum) ဦးစားပေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ #2 ရှာဖွေခြင်း: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း Ventral striatum reactivity ကို။ နှစ်ဦးစလုံးတွေ့ရှိချက်ာင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်အတူ align စွဲမော်ဒယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာက "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံသည်အခြားစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ " အဲဒီဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
26) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (Klucken et al ။, 2016) - [cue reactivity ကို / အာရုံခံစားမှုနှင့်အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် သာ. ကြီးမြတ်] - ဒါကဂျာမန် fMRI လေ့လာမှုကနေနှစ်ခုအဓိကတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သုတေသီများက "ဒီ [အပြောင်းအလဲများ] သည်စွဲရောဂါနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်သည်။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်3compulsive porn အသုံးပြုသူ 20 ခံစားခဲ့ရတစ်ခုကောက်နုတ်ချက် "orgasm-စိုက်ထူရောဂါ။ ":
27) အဆိုပါရောဂါဗေဒဆေးဝါးတလွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များ (တစ်ဝှမ်း compulsiveBANCA et al ။, 2016) - [cue reactivity ကို / ာင်း သာ. ကြီးမြတ်, တိုးမြှင့်အေးစက်တုံ့ပြန်မှု] - ဒါကကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က fMRI လေ့လာမှုအရက်သမား, Bing-စား, ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (CSB) တွင် compulsive ၏ရှုထောင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
28) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ (ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီးSnagkowski et al ။, 2016) - ယခင်ကြားနေပုံစံမျိုးစုံမှဒီအမူထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုအေးစက်ဘာသာရပ်များ, တစ်ဦးညစ်ညမ်းပုံရိပ်၏အသွင်အပြင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / sensitive ကအေးစက်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင်] ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
29) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကို (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2016) - [မတရားသော / sensitive ကလျော့နည်းအကြိုက် သာ. ကြီးမြတ်] - ကောက်နှုတ်ချက်:
30) ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လက်တွေ့အပြုအမူများနှင့် neurocognitive variable တွေကို (2016) ကိုဖြတ်ပြီးအသင်း - [အလုပ်အမှုဆောင်လည်ပတ်ဆင်းရဲတဲ့] - ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (PSB) နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအများအပြား neuro-သိမြင်လိုငွေပြမှုပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆင်းရဲတဲ့ညွှန်ပြ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဦးဖြစ်သော (hypofrontality) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်အင်္ဂါရပ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
31) Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation (Jokinen et al။ , 2017) - [အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို] - ဒီတစ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည် အထက် #16 အရာလိင်စွဲအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ - စွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိက neuro-endocrine ပြောင်းလဲမှု။ လက်ရှိလေ့လာမှုလူ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှဗဟိုမျိုးဗီဇအပေါ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရနှင့်အနီးကပ်စွဲနှင့်ဆက်နွယ်။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ယင်း DNA ကို sequence ကိုပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး (က mutation နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့) ။ အဲဒီအစား, မျိုးဗီဇ tagged ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏စကားရပ်ကိုတက်လှည့်သို့မဟုတ်ဆင်း (ဖြစ်ပါတယ်ဗွီဒီယိုအတိုပီဂနြရှင်းပြ) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံအဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲ CRF ဗီဇလှုပ်ရှားမှုခဲ့သည်။ CRF တစ်ဦး neurotransmitter နှင့်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမောင်း ထိုကဲ့သို့သောမတရားသောနှင့်နေသည်အဖြစ် အဓိကကစားသမား နှင့် ဆက်စပ်. ကြုံတွေ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအတော်များများအတွက် ပစ္စည်းဥစ္စာ နှင့် အမူအကျင့်စှဲအပါအဝင် porn စွဲ.
32) လိင် Active ကိုတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးအလိုက် (အတွင်းလိင်-Related စကားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေး ExploringAlbery et al ။, 2017) - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / sensitive က desensitization] - ဒီလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက် replicates ဒီ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ဘက်လိုက်မှုကိုကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဤတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုက“ လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုနှစ်” နှင့် ၁) လိင်စွဲမှုရမှတ်များနှင့် ၂) အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
လိင်စွဲလမ်းမှုမြင့်မားသူများအနက်နှစ်အနည်းငယ်လိင်မှုအတွေ့အကြုံနည်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ရှင်းပြချက်) ။ ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်စွဲ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ = သာ. ကြီးအရိပ်လက္ခဏာ ( သာ. ကွီးမွတျအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်) ၏ + နည်းပါးလာနှစ်ပေါင်း။ ဒါပေမယ့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကတော့ compulsive အသုံးပြုသူများသည်အတွက်သိသိသာသာငြင်းပယ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအနှစ်များ၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်တစ်ခုမှာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီရလဒ် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု" ၏ပိုပြီးနှစ်ပေါင်း သာ. ကွီးမွတျလေ့ဒါမှမဟုတ်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၏အထွေထွေထုံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ နိဂုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
33) မဖြစ်မီနှင့်တစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုအကဲခတ်ပြီးနောက်လိင် compulsive နှင့် Non-လိင် compulsive အမျိုးသားများ၏အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ (Messina et al။ , 2017) - [အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်းဆင်းရဲတဲ့] - porn ထိတွေ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို" နဲ့အမျိုးသားများတွင်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်ပေမယ့်မ။ စွဲ-related တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါလည်ပတ်ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကိုညွှန်း (ပစ္စည်းဥစ္စာမမှန်တစ်အမာခံများဖြစ်ပါသည် ပြောင်းလဲ prefrontal ဆားကစ် နှင့် ာင်း) ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
34) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (Gola et al။ , 2017) - [cue reactivity ကို / ာင်း သာ. ကြီးမြတ်, တိုးမြှင့်အေးစက်တုံ့ပြန်မှု] - ယခင်ကကြားနေပုံစံမျိုးစုံညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ၏အသွင်အပြင်ဟောကိန်းထုတ်ဘယ်မှာထူးခြားတဲ့ cue-reactivity ကိုပါရာဒိုင်းပါဝင်သောတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ ကောက်နှုတ်ချက်:
35) Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (Kunaharan et al ။, 2017) - [လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု] - erotica အပါအ ၀ င်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသောရုပ်ပုံများအားညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏တုန့်ပြန်မှု (EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းတုန့်ပြန်မှု) လေ့လာမှုသည်။ လေ့လာမှုအနိမ့်ကြိမ်နှုန်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုသူများအကြားအများအပြားအာရုံကြောကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
36) အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ဆိုက်ဘာဆိုးသွမ်းအတွက်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှဦးစီးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသွေးဆောင် သာ. ကွီးမွတျ (ထိတွေ့မှုCheng & Chiou, 2017) သာ. ကွီးမွတျ) ဆိုက်ဘာ-သက်ငယ်ပြစ်မှု, 1 အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ သာ. ကွီးမွတျအကွံ) 2, ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန် (နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း) ဝနှောင့်နှေး သာ. ကွီးမွတျ) 3: နှစ်ခုလေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့မှု - - [- causation စမ်းသပ်မှုအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, သာ. ကြီးမြတ် Impulse ဆင်းရဲတဲ့] အတုကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏ Facebook အကောင့်ကို hack ဖို့အကွံ။ ဒီညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု Impulse တိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်အချို့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို (Self-ထိန်းချုပ်မှု, တရားသဖြင့်စီရင်, အကျိုးဆက်များ ရှိ. , ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်) ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်အတူတကွယူ။ ကောက်နုတ်ချက်:
37) လိင်အင်တာနက် (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းအကဲဆတ်သောပစ္စည်း: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းဆီသို့စရိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation and Implicit ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ (Stark et al ။, 2017) - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / ာင်း / မတရားသော] - ကောက်နှုတ်ချက်:
38) Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ်အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း (Kamaruddin et al ။ , 2018) - ကောက်နုတ်ချက်:
39) မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု (Seok & Sohn, 2018) - [ယာယီ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုများ၊ ယာယီ cortex နှင့် precuneus & caudate အကြားပိုမိုညံ့ဖျင်းသောအလုပ်လုပ်နိုင်မှုဆက်သွယ်မှု] - ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်လိင်စွဲသူများအား (“ ပြaticနာရှိသည့် hypersexual အပြုအမူ”) ကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသော fMRI လေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် - ၁) ယာယီအစက်အပြောက်များ၌လိင်မှုကိစ္စလျော့နည်းသွားခြင်း (လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဟန့်တားနှောက်ယှက်သောဒေသများ)၊ 1) ယာယီ cortex အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုသို့ precuneus ကိုလျှော့ချခဲ့သည် (အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအချက်ကိုပြနိုင်သည်); 2) ယာယီ cortex အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခြင်း (Impulses သတင်းများ၏အပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်) ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
40) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (Pekal et al။ , 2018) - [သာ။ ကြီးသော cue reactivity ကို / sensitization, တိုးမြှင့်တပ်မက်] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
စာရေးသူအတော်များများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (IPD) ကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောရောဂါများကိုပြင်းထန်စွာလေ့လာခဲ့သောယန္တရားတစ်ခုမှာစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအပေါ်အာရုံစိုက်ထားသောဘက်လိုက်မှုဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုဟာ cue ကိုယ်တိုင်၏အခြေအနေအရမက်လုံးများလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏သိမြင်နားလည်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီတွင် IPD လက္ခဏာများသွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုများအပြင် cue-reactivity နှင့်တပ်မက်မှုတို့သည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတိုးပွားလာသည်ဟု I-PACE မော်ဒယ်လ်တွင်ယူဆထားသည်။ IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္investigကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမပါ ၀ င်သူ ၁၇၄ ဦး ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကို Visual Probe Task ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ကြားနေရုပ်ပုံများအရပေါ်လာသည့်မြားများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုသည်။
ထို့အပြင်သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွညွှန်ပြခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုတိုတောင်းသော Internetsex စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-reactivity နှင့်တဏှာအတွက်အညွှန်းကိန်းများကကမကထပြုထားသော IPD ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြောင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုအချိန်တွင်ကွာခြားသော်လည်း IPD ရောဂါလက္ခဏာများအရလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဂရုမစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘက်လိုက်မှုနည်းသောဆုတ်ယုတ်မှုဆန်းစစ်မှုကဖော်ပြသည်။ ရလာဒ်များသည် I-PACE မော်ဒယ်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များနှင့်ပတ်သက်သောသီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင် cue- ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်တွန်းအားများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
41) ပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကိုစဉ်အတွင်းယုတ်ညံ့ Parietal လုပ်ဆောင်ချက် (Seok & Sohn, 2018) - [ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု - ချို့ယွင်းမှုသည် PFC လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
စုဆောင်းရရှိသောအထောက်အထားများအရပြhypနာရှိသော hypersexual အပြုအမူ (PHB) နှင့်အုပ်ချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသွားခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအရ PHB ရှိသူတစ် ဦး ဦး သည်မြင့်မားသောစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော် PHB ရှိအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသောအခြေခံအာရုံကြောများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာသိရှိရသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် PHB နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကို အသုံးပြု၍ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
PHB ပါ ၀ င်သောလူနာ ၂၃ ဦး နှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်ရေးသင်တန်းသား ၂၂ ယောက်သည် Stroop လုပ်ငန်းစဉ်တွင် fMRI ကိုခံယူခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်မှုအချိန်နှင့်အမှားနှုန်းများကိုအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု၏အငြင်းပွားဖွယ်ညွှန်းကိန်းများအဖြစ်တိုင်းတာသည်။ PHB နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ချို့ယွင်းသောလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Stroop လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူလက်ျာဘက် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal cortex တွင် activation နိမ့်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤဒေသများရှိသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခိုသောတုန့်ပြန်မှုများသည် PHB ပြင်းထန်မှုနှင့်အဆိုးဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ညာဘက် DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal cortex အသီးသီးပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်သိမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမြင်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ PHB ရှိသူများသည် PHB အတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသော DLPFC နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal cortex တွင်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားလျော့နည်းသွားစေပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားချို့ယွင်းလာခဲ့သည်။
42) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse (Antons & Brand, 2018) - [တိုးမြှင့်တပ်မက်ခြင်း, သာ။ ကြီးမြတ်ပြည်နယ် & ရို Impuls] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
43) Impulse နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်၏ရှုထောငျ့ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြားStephanie et al။ , 2019) - [တိုးမြှင်မတရားသော, သာ. ကြီးမြတ်လေ့, (hypofrontality) ဝနှောင့်နှေး] ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောအသုံးပြုသူများသည်တဏှာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအရအမြင့်ဆုံးရမှတ်များ၊ နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအတွက်အမြင့်ဆုံးရမှတ်များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဖြေရှင်းမှုအတွက်ရမှတ်များနှင့်သိမှတ်မှုလိုအပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည် impulsivity နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များဖြစ်သောတဏှာနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာသဘောထားများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော IP အသုံးပြုသူများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ရလာဒ်များသည်တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုများနှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။
ထို့အပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော IP အသုံးပြုမှုရှိသူများသည်အပန်းဖြေမှု - မကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် IP အပေါ် ပို၍ ဆိုးသောသဘောထားရှိသည်။ ဤရလဒ်သည် IP ကိုအသုံးပြုမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားရှိခဲ့သော်လည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော IP အသုံးပြုသူများသည် IP ကိုအသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်မှုမြင့်မားသည်သို့မဟုတ် IP ကိုအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများရှိသည်ဟုထင်မြင်နိုင်သည်။ ဤသည်စွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်သောခံစားမှုသဘောတရားနှင့်ကိုက်ညီသည် (Berridge & ရော်ဘင်ဆင်, 2016), အရာစွဲနေစဉ်အတွင်းလိုသောမှ like နှိပ်နေပြောင်းကုန်ပြီအဆိုတင်သွင်း။
44) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်ကွဲအမျိုးသားကောလိပ်များတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုကိုချဉ်းကပ်ပါSkyler et al ။, 2019) - [တိုးမြှင့်ချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှု (sensitization)] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်ကျောင်းသားများသည် AAT လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ချဉ်းကပ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းအဖြေများကထောက်ခံသည်။ စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ရှားထက်Bradley et al ။ , 2004; Field et al ။ , 2006, 2008).
ယေဘုယျအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်များကစွဲလမ်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုသည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းထက်ပိုမိုလျင်မြန်သောသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားသည့်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွင်အခြားသိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများ၏ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင် BPS ၏စုစုပေါင်းရမှတ်များမှာအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များ၊ ပြသနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဒီဂရီပိုမိုပြင်းထန်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။ PPUS မှခွဲခြားထားသည့်အတိုင်းပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများနှင့်ပြproblemနာများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲတစ် ဦး ချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက် ၂၀၀% ထက်ပိုသောချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။
အတူတူယူရလဒ်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (အကြားမျဉ်းပြိုင်အကြံပြုGrant et al ။ , 2010) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း) (အရက်သုံးမမှန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဆင်တူ, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုထက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုမြန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Field et al ။ , 2008; Wiers et al ။ , 2011), ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း (Cousijn et al ။ , 2011; Field et al ။ , 2006), နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲပုံမမှန် (Bradley et al ။ , 2004) ။ သိမြင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက် neurobiological ယန္တရားများအကြားတစ်ဦးထပ်တူ (ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းသောဖွယ်ရှိပုံရသည်Kowalewska et al ။ , 2018; Stark et al ။ , 2018).
45) oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation- ဆက်စပ် downregulation: miRNA ဗီဇ၏တစ် ဦး က DNA ကို methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Bostrom et al ။, 2019) - [ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်] ။ hypersexuality (ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှု) ရှိသည့်ဘာသာရပ်များအပေါ်လေ့လာမှုသည်အရက်သမားများတွင်ဖြစ်ပွားနေသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြထားသည်။ epigenetic အပြောင်းအလဲများသည်ချစ်ခြင်း၊ နှောင်ကြိုး၊ စွဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အရေးကြီးသော oxytocin system နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇများ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
အရံသွေးထဲမှာနေတဲ့ DNA methylation အသင်းအဖွဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့သိသိသာသာ differential hypersexuality ရောဂါ (HD) လူနာ methylated ဖြစ်ကြောင်း MIR708 နှင့် MIR4456 နှင့်ဆက်စပ်ကွဲပြားစင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖေါ်ထုတ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ hsamiR- 4456 ဆက်စပ် methylation locus cg01299774 ကအဓိကအား HD မှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့်စွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, အရက်မှီခိုအတွက် differential methyl ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ oxytocin အချက်ပြလမ်းကြောင်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု Kafka et al နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်သိသိသာသာ HD ကို defining ဝိသေသလက္ခဏာများအများအပြားအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခံရဖို့ပုံရသည်။ , ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ dysregulation, compulsive, Impulse နှင့် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) စွဲလမ်းအဖြစ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ MIR4456 HD မှာသိသိသာသာနိမ့်စကားရပ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု cg01299774 locus မှာ DNA methylation MIR4456 ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ဦးစားဦးနှောက်တစ်သျှူးများနှင့် HD ကို၏ pathogenesis မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ထင်အဓိကအာရုံခံမော်လီကျူးယန္တရားများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒါက miRNA putatively ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ။ အဆိုပါပီဂြီနိုမျထဲမှာဆိုင်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်အထူးအလေးပေး onMIR4456 နှင့် oxytocin စည်းမျဉ်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ, HD ၏ pathophysiology နောက်ကွယ်မှဇီဝဗေဒယန္တရားများ elucidating စေတယ်။
46) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ခြားနားချက်များ (Draps et al ။, 2020) - [hypofrontaility: prefrontal cortex & anterior cingulate cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စ descreased] ကောက်နုတ်ချက်များ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD)၊ လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ (GD) နှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါ (AUD) ရှိသူများနှင့်အုပ်စုတစ်စုချင်းစီရှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စများ (GMVs) ကိုဤရောဂါများမပါသူများ (ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ၊ HCs) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြထားသည်။
HC ပါဝင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘေးဒဏ်သင့်သူများ (CSBD, GD, AUD) သည်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိအထူးသဖြင့် orbitofrontal cortex တွင် GMV ငယ်များပြခဲ့သည်။ အများဆုံးသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု GD နှင့် AUD အုပ်စုများနှင့်အနည်းဆုံး CSBD အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ CSBD အုပ်စုတွင် GMV နှင့်ရောဂါပြင်းထန်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ CSBD ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှာညာဘက် anterior cingulate gyrus တွင် GMV လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်.
ဒီလေ့လာမှုက CSBD, GD နှင့် AUD အုပ်စု ၃ ခုမှာသေးငယ်တဲ့ GMV ပြသခြင်းကိုပထမဆုံးပြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်တိကျသော Impulse Control Disorders နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြသည်။
[ပြင်ဆင်ရန်] cingulate cortex (ACC) သည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုများ ၊ ၊ မှားယွင်းသောခန့်မှန်းခြင်းအပြောင်းအလဲ၊ ဆုချခြင်းသင်ယူခြင်း ၊ ။ CSBD နှင့် ပတ်သက်၍ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောတုံ့ပြန်မှုများအရ ACC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် CSBD ရှိအမျိုးသားများ၏လိင်ဆန္ဒများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ CSBD ရှိအမျိုးသားများသည် ACC လေ့ကျင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီအတိုင်းတော့, လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များ ACC အသံအတိုးအကျယ်ယောက်ျားအတွက် CSBD လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်ကြိုတင်အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့လာမှုများတိုးချဲ့။
47) Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများရှိ Plasma Oxytocin အဆင့်များ (Jokinen et al ။, 2020) [အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှု] ။ ။ အမျိုးသား hypersexuals (လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် neuro-endocrine လေ့လာမှု ၄ ခုကိုထုတ်ဝေသည့်သုတေသနအဖွဲ့မှ။ oxytocin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်၊ မြင့်မားသောသွေးပမာဏကိုလိင်စွဲလမ်းသူများအတွက် overactive stress system ၏ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ်အနက်ဖွင့်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်သုတေသီ၏ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသူများအတွက်စိတ်မပါသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာကုထုံး (CBT) သည် hypersexual လူနာများတွင် oxytocin ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဖယ်ရှားခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းစသည့် pathophysiological ရှုထောင့်များကိုပေါင်းစပ်ထားသော Hypersexual disorder (HD) ကို DSM-5 အတွက်ရောဂါလက္ခဏာအဖြစ်အကြံပြုခဲ့သည်။ “ မသန့်ရှင်းသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ” ကိုယခု ICD-11 တွင်ဖြစ်ပွားသောဒေါသကိုထိန်းချုပ်သောရောဂါအဖြစ်တင်ပြသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများသည် HD ရှိအမျိုးသားများတွင် dysregulated HPA axis ဟုပြသည်။ Oxytocin (OXT) သည် HPA ဝင်ရိုး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ HD နဲ့လူနာတွေအတွက် OXT အဆင့်ကိုလေ့လာမှုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ HD ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် CBT ကုသမှုသည် OXT အဆင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးပါ။
ကျနော်တို့ပလာစမာ OXT အဆင့်ဆင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည် HD နှင့်အတူအထီးလူနာ 64 နှင့်ယောက်ျားလေး 38 အသက်အရွယ် - လိုက်ဖက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexual အပြုအမူကိုတိုင်းတာသည့်အဆင့်အတန်းကို အသုံးပြု၍ ပလာစမာ OXT အဆင့်နှင့် HD ရှုထောင့်လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် HD ရှိလူနာများသည် OXT အဆင့်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။ hypersexual အပြုအမူကိုတိုင်းတာ OXT အဆင့်ဆင့်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ CBT ကုသမှုကိုပြီးစီးသောလူနာများသည်ကြိုတင်ကုသမှုမတိုင်မီ OXT အဆင့်သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် hypersexual disorder နှင့်အတူအမျိုးသားလူနာများအတွက် hyperactive oxytonergic system ကိုအကြံပြုသည်။ အောင်မြင်သော CBT အုပ်စုကုထုံးသည် hyperactive oxytonergic system အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
48) တားမြစ်ထားသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြproblemနာများအင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((Anton & Brand, 2020) - [သည်းခံစိတ်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်မှု] - စာရေးသူများကသူတို့၏ရလဒ်သည်သည်းခံမှု၊ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီ (ဥပမာ, Antons & အမှတ်တံဆိပ်, 2018; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola et al ။ , 2017; Laier et al ။ , 2013), wအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ပုဂ္ဂလဒိuse္တဏှာစွဲလမ်းမှုနှင့် IP ပြproblemနာကိုအသုံးပြုမှု၏ပြင်းထန်မှုအကြားဆက်စပ်မှုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် cue-reactivity ကိုတိုင်းတာသည့်အနေဖြင့်တပ်မက်ခြင်းမှာတိုးပွားလာသော IP အသုံးပြုမှု၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဒီသည်းခံစိတ်မှဆက်စပ်လိမ့်မည် ( cf. Wéry & Billieux, 2017) ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပုဂ္ဂလဒိive္ ဦး စားပေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ် ဦး ချင်းမခံခဲ့ရကြောင်းပေးသော။ ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုထားသောစံသတ်မှတ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမြင့်မားသောလက္ခဏာပြင်းထန်မှုရှိသောလူများအား cue-reactivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သောအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်ပါ။
အတူတူယူ, အ insula ဟာ interoceptive system ကိုကိုယ်စားပြုသောအဓိကဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရောက်ရှိသောအခါ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ဒေတာအချက်အလက်များအရပြIPနာရှိသော IP အသုံးပြုမှုပိုမိုဆိုးရွားသည့်လက္ခဏာများပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်စဉ်အတွင်းအင်ဆူလာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုတွင်လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်း၌ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တီသူ၏လှုပ်ရှားမှုပုံစံသည်သည်းခံမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ impulsive system ၏ hyperactivity နည်းပါးခြင်းကြောင့် interoceptive နှင့် reflective system ၏အရင်းအမြစ်များကိုလျော့နည်းစေသည်။
ထို့ကြောင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာ IP အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု (ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော) ရှုထောင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့မှသာအရင်းအမြစ်များအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုသည် IP အသုံးပြုမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းအားပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်စနစ်နှစ်ခုစလုံးအကြားမညီမမျှဖြစ်ခြင်းသာမကလှုံ့ဆော်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် interoceptive စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
49) ပုံမှန် Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသော Luteinizing Hormone Plasma Levels (ယောက်ျားများတွင် Hypersexual Disorder) (2020) - [အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုကိုညွှန်ပြနိုင်သည်] - အမျိုးသား“ hypersexuals” (လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် neuro-endocrine လေ့လာမှု (၅) ကိုထုတ်ဝေသည့်သုတေသနအဖွဲ့မှ၊ စိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲသည့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။1, 2, 3, 4, 5။ ) ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ဒီလေ့လာမှုမှာ HD ပါ ၀ င်တဲ့အမျိုးသားလူနာတွေမှာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် plasma testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့သည် LH ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပလာစမာအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
HD သည်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်အမူအကျင့်သည် dysphoric States and stress ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊1 ကျွန်ုပ်တို့ယခင်က HPA ဝင်ရိုး၏ hyperactivity နှင့်အတူ dysregulation အစီရင်ခံတင်ပြပါပြီ13 HD နှင့်အတူယောက်ျားများတွင်ဆက်စပ်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများအဖြစ်။
ဦး နှောက်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ HPA နှင့် HPG ဝင်ရိုးတို့အကြားရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။27 အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး၏သက်ရောက်မှုမှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ LH ဖိနှိပ်မှုနှင့်အကျိုးဆက်မျိုးပွားတစ်ခုတားစီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။27 စနစ် ၂ ခုသည်အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ အစောပိုင်းဖိစီးမှုများသည် neuroendocrine တုန့်ပြန်မှုများကိုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဆိုပြုထားသောယန္တရားများတွင် HPA နှင့် HPG အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆုလာဘ်အာရုံကြောကွန်ယက်သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဒေသများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထိန်းချုပ်မှုကိုတားဆီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။32 နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက hypersexual အမျိုးသားများတွင် LH ပလာစမာအဆင့်မြင့်လာခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်များက neuroendocrine systems နှင့် HD တွင် dysregulation ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာစာပေများကိုကြီးထွားစေသည်။
50) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်ကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုများကိုချဉ်းကပ်ပါ (၂၀၂၀) [sensitization နှင့် desensitization] - Nအမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးသုံးစွဲသူများအားယူရို - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုအရဆေးစွဲမှုလေ့လာမှုများတွင်တွေ့ခဲ့ရသူများကိုထင်ဟပ်စေသောတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်။ porn (sensitization) နှင့် anhedonia (desensitization) ကိုဘက်လိုက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုတွင်လည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ငါတို့သည်လည်း anhedonia တွက်ချက်သော SHAPS အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များနှင့်ရမှတ်များအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအချက်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုအားကောင်းလေ၊ တစ် ဦး ချင်းကြုံတွေ့ခံစားရသည့်အပျော်အပါးနည်းလေလေဖြစ်သည်“ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်စိတ်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာသည်အပျော်အပါး (anhedonia) နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု (သို့) အချို့သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့မဟုတ်ဘဲအဝေးမှရွေ့လျားစေရန်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သောသဘောထားသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်သောအဓိကသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ စွဲစွဲလမ်းစေသော“ လှုံ့ဆော်မှု” လှုံ့ဆော်မှုများအကြားမညီမမျှဖြစ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှစ်မျိုး
drives တွေကိုနှင့်စည်းမျဉ်းအလုပ်အမှုဆောင်စနစ်များ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပါ ၀ င်ခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်စွဲလမ်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားမည့်အစားချဉ်းကပ်မှုသည်အတော်အတန်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းများဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ လိင်ဆက်ဆံသည့်ကောလိပ်ကျောင်းသားအမျိုးသမီးများအကြားရှိမရှိဆန်းစစ်ထားသည်။
သင်တန်းသားများကိုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် 24.81 ms ၏သိသာချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်သိသိသာသာအပြုသဘောပြmနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေးရမှတ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းသည်သူ၏ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမှန်မှန်အသုံးပြုသောအမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုတင်ပြသည့်တိုးချဲ့မှုများ (Sklenarik et al ။ , 2019; Stark et al, 2017) ။
ထိုမှတပါး, ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များသိသိသာသာအပြုသဘော erotic လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်မှု၏ဒီဂရီ, လေ့လာတွေ့ရှိသောပိုပြီး anhedonia ကြောင်းညွှန်ပြ anhedonia နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။… ..ဤအချက်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုအားကောင်းလေ၊ တစ် ဦး ချင်းကြုံတွေ့ခံစားရသည့်အပျော်အပါးနည်းလေလေဖြစ်သည်။
51) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအတွက်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဦး နှောက်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။ - [အသိအမြင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ] - ကောက်နုတ်ချက်များ။
အမူအကျင့်အဆင့်တွင်လူနာများသည်လွန်ခဲ့သောအပတ်က၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုနှေးကွေးစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဘာသာစကားဆိုင်ရာ gyrus သည်လူနာအုပ်စုအတွင်းရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်အတွင်းအင်ဆူလာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပြသခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်သိသိသာသာမြင့်သောရုပ်ပုံများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါပိုမိုမြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လူနာများသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မှတ်ဥာဏ်ကိုပြသခဲ့သည်။ တီဤတွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းစေသည့်သီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြုပြင်စဉ်ကာလအတွင်းအဓိကအားဖြင့်အချက်အချာကျသည့်အနေဖြင့်အင်ဆူလာနှင့်အဓိကအားထားသည့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုဆက်သွယ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။
…။ ၎င်းကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ (သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များကြောင့်) လူနာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပြီးအဓိကအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှု (insula) နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ယက် (ယုတ်ညံ့ parietal) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ CSB ကိုပြသထားသောဘာသာရပ်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ပိုမိုအာရုံထွေပြားစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဒေတာ CSB အတွက်စွဲ၏ IST ထောက်ခံပါတယ်။
52) အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိreward္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုလူ့အသိုက်နှင့် Orbitofrontal cortex (၂၀၂၀) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ - [ကေ်ာင်း] - ကောက်နှုတ်ချက်များ
ဘာသာရပ်တစ်ခုသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသို့မဟုတ် valence အပေါ် VSS ကလစ်တစ်ခုကိုပိုမိုမြင့်မားလေလေ၊ VSS ကြည့်ရှုစဉ် NAcc၊ caudate nucleus နှင့် OFC တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုတွေ့ရှိရသောလှုပ်ရှားမှု။ ထို့အပြင် tဘာသာရပ်များသည် s-IATsex မှတိုင်းတာသည့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုလက္ခဏာများ (PPU) ကိုဖော်ပြသည့်အခါသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှုန်းနှင့် NAcc အကြားပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် caudate nucleus လှုပ်ရှားမှုသည်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။
၄ င်းတို့၏ preference coding သည်ကွဲပြားခြားနားမှုသည်အချို့သောသူများကြုံတွေ့ရသော VSS အသုံးပြုမှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည့်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ VSS ကြည့်နေစဉ်အတွင်း NAcc နှင့် caudate လုပ်ဆောင်မှုကို VSS ကြည့်ရှုစဉ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းအကြောင်းအရာသည်ပိုမိုပြaticနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု (PPU) ကိုတင်ပြသောအခါဤအသင်းအဖွဲ့၏အားသာချက်မှာပိုမိုကြီးမားသည်။ ရလဒ်သည် NAcc တွင်မက်လုံးများတန်ဖိုးတုံ့ပြန်မှုများနှင့် caudate ကွဲပြားခြားနားသော ဦး စားပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၊ PPU အတွေ့အကြုံများအကြားပိုမိုပြင်းထန်စွာခွဲခြားခြင်းဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။။ ၎င်းသည်အတိတ်လေ့လာမှုများကိုတိုးချဲ့ပြီး PPU သည်ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်မနှစ်သက်သောအခြေအနေ [29,38] နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက VSS အားပိုမိုမြင့်မားသောကိုယ် ၀ င်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် SID အလုပ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ မျှော်လင့်ထားသည့်အဆင့်တွင် PPU တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်တိုးမြှင့် NAcc လုပ်ဆောင်မှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ PPU နှင့်ဆက်နွယ်သည့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ပြောင်းလဲထားသောမက်လုံးများကိုအထူးသဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပေးပို့သည့်အဆင့်တွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ် ဦး ချင်း ဦး စားပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှသာ။ NAcc တွင်မက်လုံးတန်ဖိုးတန်ဖိုးအချက်ပြမှုတိုးများလာခြင်းကစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဦး စားပေး VSS ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။
53) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအာရုံကြောသိပ္ပံ - ကာကွယ်တားဆီးရေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက် prefrontal cortex နှင့် ၀ က်သားစားသုံးမှုကို fNIRS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (vs. control clip) သည်ညာဘက်ခြမ်းရှိ Brodmann ၏45ရိယာ ၄၅ ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ Self- အစီရင်ခံစားသုံးမှုအဆင့်နှင့်မှန်ကန်သော BA 45 ကိုအသက်သွင်းခြင်းအကြားအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုလည်းပေါ်လာသည်။ Self- အစီရင်ခံစားသုံးမှုပမာဏများလေလေ၊ သို့သော်ငြားလည်း, အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်ခါမှမသုံးစွဲဖူးသောသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုကလစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှန်ကန်သော BA 45 ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသကြသည် (စားသုံးသူမဟုတ်သူများနှင့်စားသုံးသူများအကြားအရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုပြသည်). ဤရလဒ်သည်စွဲလမ်းမှုနယ်ပယ်တွင်ပြုလုပ်သောအခြားသုတေသနများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာအာရုံအာရုံခံစနစ် vicarious ခေါ်ဆောင်သွားမှုကိုနှိုးဆွနိုင်သည့်စာနာမှု၏ယန္တရားမှတဆင့်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။
54) ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု (၂၀၂၀) တွင်အမျိုးသားများအကြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသော ၂ ခုရွေးချယ်သည့် oddball လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်များ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ချို့ယွင်းသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးထိန်းချုပ်မှု (BIC) သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ဟုလူသိများသည်။ သို့သော်ဤအချက်သည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိချေ။ ဒီလေ့လာမှုကအဖြစ်အပျက် -related အလားအလာ (ERPs) ကိုအသုံးပြု။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစွဲ (TCA) ကို ဦး တည်သဘောထားတွေနှင့်အတူအထီးတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် BIC ၏အချိန်သင်တန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏လစ်လပ် BIC ၏ neurophysiological သက်သေအထောက်အထားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
TCA နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီသည် HC ပါ ၀ င်သူများနှင့် cyopsex စွဲလမ်းမှုကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်ဟူသောအမြင်ကိုထောက်ခံသောပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါ (သို့) အမူအကျင့်စွဲမှုများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ERP ၏ဝိသေသလက္ခဏာများထက် ပိုမို၍ စိတ်ဆန်ဒရှိကြသည်။.
သီအိုရီအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလာဒ်များအရဆိုက်ဘာဆက်စ်စွဲသည်အရက်သေစာသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုရောဂါနှင့် electrophysiological and behavioral level မှာ Impulsivity နှင့်ဆင်တူသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
55) အဖြူရောင်ဒြပ်ထုဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ - Diffusion Tensor Imaging လေ့လာမှု - ခporn / sex စွဲသူများ (CSBD) ၏အဖြူရောင်အမှုန်များဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမိုးရေစူးစမ်းလေ့လာမှု။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် CSB ဘာသာရပ်များအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု။ ကောက်နုတ်ချက်များ
၎င်းသည်မလိင်အင်္ဂါအပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများရှိလူနာများအကြားခြားနားချက်များကိုအကဲဖြတ်သည့်ပထမဆုံး DTI လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSBD ဘာသာရပ်များရှိ ဦး နှောက်၏ဒေသ ၆ ခုတွင်အက်ဖ်အေ၏လျှော့ချမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဝေစာများကို cerebellum (cerebellum တွင်တူညီသောအစိတ်အပိုင်းများရှိနိုင်သည်)၊ အတွင်းပိုင်းဆေးတောင့်၏ retrolenticular အစိတ်အပိုင်း၊ သာလွန်သော corona radiata နှင့်အလယ်သို့မဟုတ်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် occipital gyrus အဖြူရောင်အမှုန်များတွင်တွေ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ DTI အချက်အလက်များအရ CSBD ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများသည်ယခင်ကစာပေတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဒေသများနှင့်စွဲခြင်းနှင့်စွဲခြင်းနှင့် OCD တို့နှင့်ထပ်တူကျနေသည် (အနီရောင်areaရိယာကိုကြည့်ပါ။ သဖန်းသီး။ 3) ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု CSBD နှင့် OCD နှင့်စွဲနှစ် ဦး စလုံးအကြားမျှဝေအက်ဖ်အေလျှော့ချအတွက်အရေးပါသောတူညီသရုပ်ပြခဲ့သည်။
56) စကင်နာကိုလိင်မက်လုံးများနှောင့်နှေးစေခြင်း - လိင်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အပြောင်းအလဲ၊ ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုများ - တွေ့ရှိချက်များသည်စွဲလမ်းပုံစံ (cue-reactivity) နှင့်မကိုက်ညီပါ။
အမျိုးသား ၇၄ ဦး ၏ရလဒ်များအရဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်(ရိယာများ (amygdala, dorsal cingulate cortex, orbitofrontal cortex, nucleus accumbens, thalamus, putamen, caudate nucleus နှင့် insula) သည်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကထက် ပိုမို၍ သက်ဝင်လှုပ်ရှားကြောင်းပြသသည်။ အသီးသီးဗီဒီယိုများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါ။ သို့သော်ဤလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုညွှန်းကိန်းများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအချိန်သို့မဟုတ်စရိုက်လက္ခဏာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။
ဆွေးနွေးချက်နှင့်နိဂုံးများ - ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်နယ်ပယ်များရှိလှုပ်ရှားမှုသည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အချက်များပါ ၀ င်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာမက်လုံးပေးမှုနှောင့်နှေးခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်၏အောင်မြင်မှုသည်အောင်မြင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယူဆရသည် ဆုလာဘ် -related ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပြproblemနာသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်းကိန်းများအကြားအသင်းအဖွဲ့များတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသာနမူနာ၌တည်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့မဟုတ်ဘဲကျန်းမာနမူနာအတွက်ပေလိမ့်မည်။
စာရေးဆရာများသည်အခြားစွဲလမ်းမှုအတွက် cue-reactivity (sensistization) ကိုဆွေးနွေးကြသည်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုများတွင် Incentive Sensitization Theory နှင့်ပတ်သက်သောရလဒ်များသည်ရှေ့နောက်မညီမှုဖြစ်သည်။ အများအပြား meta-analysis သည်ဆုလာဘ်စနစ်အတွက် cue ဓာတ်ပြုမှုတိုးလာပြသခဲ့သည် (Chase, Eickhoff, Laird, & Hogarth, 2011; Kühn & Gallinat, 2011b; Schacht, Anton, & Myrick, 2012), သို့သော်အချို့လေ့လာမှုများသည်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဘူး (Engelmann et al, 2012 ။ လင်း et al, 2020 ။ Zilberman, Lavidor, Yadid, & Rassovsky, 2019) ။ ထို့အပြင်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွဲလမ်းစေသည့်ဘာသာရပ်များ၏ဆုလာဘ်ကွန်ယက်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသော cue ဓါတ်ပြုမှုကိုလေ့လာမှုများမှလူနည်းစုတွင်သာတွေ့ရှိရပြီး၊ Antons et al ။ (၂၀၂၀)။ ဒီအကျဉ်းချုပ်အရ, စွဲစွဲလမ်းအတွက် cue ဓာတ်ပြုခြင်းတစ် ဦး ချင်းစီအချက်များနှင့်လေ့လာမှု - တိကျတဲ့အချက်များကဲ့သို့အများအပြားအချက်များအားဖြင့် modulated ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်Jasinska et al ။ , 2014) ။ striatal လုပ်ဆောင်မှုနှင့် CSBD ၏အန္တရာယ်အချက်များအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုညရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားသောနမူနာပင်ငါတို့ဖြစ်နိုင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်များ၏သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးစဉ်းစားနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ multicausality မှတရားမျှတမှုလုပ်ဖို့နောက်ထပ်အကြီးစားလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ဥပမာဒီဇိုင်းအရပြောရမယ်ဆိုရင်အာရုံခံစားမှုပုံစံများ၊Jasinska et al ။ , 2014).
57) Compulsive Sexual Behavior Disorder (2021) တွင် erotic cues များသို့ erotic orbitofrontal cortex reactivity- [sensitization-ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက porn စွဲသူများ၏ ventral striatum နှင့် anterior orbitofrontal cortex တွင်ပိုမိုကြီးမားသော cue-reactivity] ကောက်နှုတ်ချက်:
ပိုမိုကောင်းမွန်သော parietal cortices, supramarginal gyrus, pre and postcentral gyrus, နှင့် basal ganglia တို့ပါ ၀ င်သော CSBD ဘာသာရပ်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိရသောလုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံသည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ somatosensory နှင့်မော်တာဆုလာဘ်သို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စားသုံးမှုတို့ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။အလိုရှိသည်) ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များဖြင့်နှိုးဆော်သော CSBD တွင်Locke & Braver, 2008; Hirose, Nambu, & Naito, 2018) ့။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသော Incentive Sensitization သီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်သည်။ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2008) စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၌ cue-reactivity နှင့်ဆိုင်သောအချက်အလက်များGola & Draps, 2018; Gola, Wordecha, et al ။ , 2017; Kowalewska et al ။ , 2018; Kraus et al ။ , 2016b; Potenza et al ။ , 2017; Stark, Klucken, Potenza, အမှတ်တံဆိပ်, & Strahler, 2018; Voon et al ။ , 2014) ... ။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ ROI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များဖြင့်ဤလုပ်ငန်းသည်ယခင်ထုတ်ဝေထားသောရလဒ်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်။Gola, Wordecha, et al ။ , 2017) အဲဒါကိုပြခြင်းအားဖြင့် အ CSBD ၌ erotic reward cues များအတွက်ဆုလာဘ်၏ circuitry ၏တုံ့ပြန်မှုသည်ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းအဆင့်တွင်သာမက ventral striatum ၌သာမက anterior orbitofrontal cortex (aOFC) ၌ပါဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင်ဤဒေသရှိလုပ်ဆောင်မှုသည်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်မူတည်သည်။ အဆိုပါ BOLD အချက်ပြအပြောင်းအလဲသည် CSBD တစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများထက်ပိုမြင့်မားသည်၊ အထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးများအတွက်၊ erotic reward ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းသည် erotic reward cues များရှိနေခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံအပြုအမူလှုံ့ဆော်မှုကိုမကျဆင်းစေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းကိုအကြံပြုနိုင်သည် aOFC သည် CSBD သင်တန်းသားများအတွက်ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်ရန်အထူးဆုလာဘ်အမျိုးအစားများကိုညွှန်ပြသောစွမ်းရည်ကိုဖြန်ဖြေရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အမှန်မှာ၊ OFC ၏အခန်းကဏ္သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပုံစံများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
"Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးများအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် (မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ)၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုပေါင်း ၄၀ ကျော်ကိုချန်လှပ်ထားစဉ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤ“ မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်လှည့်စားသောလေ့လာမှုများ၏ဝေဖန်မှုများ” စာမျက်နှာတွင်သင်ရှာမတွေ့နိုင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအားဆန်းစစ်လေ့လာနေပါကဤစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ - porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ဒါဟာကို examine YBOP ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုယင်း၏ချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ, ဘက်လိုက်မှု, ကွာဟပျက်ကွက်နှင့်ပရိယာယ်အပါအဝင် '' 'သုတေသနစာမျက်နှာ, "။
၏ဝေဖန်မှု: အယ်ဒီတာမှပေးစာ "Prause et al ။ (2015) ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု စွဲဟောကိန်းများ"
နှင့် "Debunkingသငျသညျ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပူဖြစ်သင့်?” - The Daily Dot's Claire Down မှပြုလုပ်သည်။ (၂၀၁၈)
ဒါဝိဒ်သည် Ley အဆိုပါ Nofap လှုပ်ရှားမှု (မေလ, 2015) တိုက်ခိုက်
RealYourBrainOnPorn တွစ်တာများ - ဒယ်နီယယ်ဘာ့ဂ်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်လိုလားသူမဟာမိတ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံရန်ဘက်လိုက်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုဖန်တီးသည် (2019ပြီလ၊ ၂၀၁၉ တွင်စတင်သည်).
Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။
ယင်းကိုစွဲလမ်းစေခြင်းဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသလော။ ဗီဒီယိုများ Madita Oeming's ကိုဖြုန်းတီးနေသည် "အဘယ်ကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုစွဲလမ်းခြင်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်"။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊
ယုံကြည်ချက်များ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့် porn အသုံးပြုမှု။ 40 လေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
: "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းပျောက်ကရှင်းပြသည်သောကလက်ခံစကားပြောအမှတ် Debunking လေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်ကလိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်.
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုPorn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအပေါ် ဦး နှောက်လေ့လာမှု"
Pingback: အကူအညီ, ငါ့သူငယ်မ Pornn မြင်ပြီ: အခုဘာလဲ?! - BeinTouch
Pingback: Porn အလွန်အကျွံကြည့်တဲ့အခါမင်းရဲ့ ဦး နှောက်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲ။
Pingback: NoFap သည်ပြီးပြည့်စုံသောသေခြင်းတရားဆုပ်ကိုင်ကုသနည်း (ငါ့အတွေ့အကြုံ)
Pingback: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှု — @im_1776
Pingback: Kelly Saylor Counseling & Consulting ကို ရပ်တန့်ရန် လိင်စွဲလမ်းခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်ခက်ခဲသနည်း။
Pingback: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များကို ဥရောပကောင်စီကော်မတီမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသည် - ကျွန်ုပ်၏ခရစ်ယာန်နေ့စဉ်
Pingback: ဥရောပကောင်စီ ကော်မတီသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုသည် - စိတ်ဝိညာဉ်ရည်ရွယ်ချက်
Pingback: NoFap နှင့် Dopamine – NoFap သည် Dopamine ကိုတိုးစေပါသလား။ (ဂရပ်)
ပြဿနာညစ်ညမ်းပုံအသုံးပြုနည်း: ဥပဒေနှင့်ကျန်းမာရေးမူဝါဒထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း (၂၀၂၁)